Kana paine mari yasara, unogona kunakidzwa ne18k yegoridhe pane yako Apple Watch Series 4 | Ndinobva mac
Izvi ndizvo zvinopihwa naBrikk, kambani yakatsaurirwa kwete chete kuti ishandise goridhe mune nyowani Apple Watch Series 4 mamodheru (40 kana 44mm) asi zvakare inokwanisa kushandura zvachose dhizaini wachi kuti iisiye ine goridhe yero, chena goridhe kupera uye kunyangwe yakasimuka goridhe, iine batai weemaradhi kana dhaimani pakorona yedhijitari, nguva dzose kune mutengi kuravira.
Chokwadi sezvo Apple haichisiri inogadzira smartwatches mune apedza senge goridhe na iyo «Shanduro» mhando Vazhinji vashandisi vasina matambudziko emari emhando ipi neipi, tendeukira kumakambani akaita saBrikk kuti vashandure zvigadzirwa zvavo zviite chidimbu chega.
Mutengo unogona kusiyana zvichienderana nezvatinoda asi mitengo inotangira pa $ 29.000 yegoridhe-yakafukidzwa mamodheru uye ipapo unogona kuisa mari patafura kusvika svika kutenderedza $ 230.000 yekumisikidza mangoda kana emeralds kupera kweApple yako Watch Series 4. Ehe cap inoiswa nemutengi iye uye magumo anogona kusiyana.
Uye zvakare, iyi kambani inopa mukana wekutora maAirPod edu, iyo nyowani iPhone XS, reflex kamera kana iyo PS4 yaDualShock uye nekuvasiya vaine iwo mapedzero akafanana neApple Watch Series 4. Kana iwe uchida kuona zvese izvo kambani iyi inogona kupa iwe, iwe unongofanirwa kuwana yako peji peji. Zviripachena izvi zvakachengeterwa mamirionea uye kune avo vanofarira goridhe mumagetsi zvigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kana iwe uine mari yekusiya, unogona kunakidzwa ne18k goridhe pane yako Apple Watch Series 4
Ishaac Zerreitug akadaro
Layla San Antolin caprichito yauri kuda hahahahaha
Pindura Ishaac Zerréitug
Pixelmator Pro ikozvino inotsigira macOS Mojave yakasviba uye yakajeka theme